HeyTea က အဖျော်ယမကာ များ ကိုဒေါ်လာ ၄. ၆ ဖြင့် ကန့်သတ် ထားသည် – Pandaily
HeyTea က အဖျော်ယမကာ များ ကိုဒေါ်လာ ၄. ၆ ဖြင့် ကန့်သတ် ထားသည်
Feb 24, 2022, 21:32ညနေ 2022/02/24 23:08:31 Pandaily
တရုတ် အဖျော်ယမကာ အမှတ်တံဆိပ် HeyTea က ကြာသပတေး နေ့တွင် ကြေငြာ ခဲ့သည်ကုန်ပစ္စည်း စျေးနှုန်း ညှိနှိုင်းမှု ပြီးစီး ခဲ့သည်ဒီႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ကစၿပီး လုပ္ တာပါ။ ယခုႏွစ္တြင္ ယြမ္ ၂၉ (ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၆) ထက္ ေက်ာ္လြန္ ေသာ အ ေဖ်ာ္ ယမကာ အသစ္ မ်ားကို မိတ္ဆက္ မည္မဟုတ္ဘဲ လက္ရွိ ထုတ္ကုန္ မ်ား ယခုႏွစ္တြင္ ေစ်းတက္ မည္မဟုတ္ဟု ကတိျပဳ ထားေၾကာင္း ကုမၸဏီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ညှိနှိုင်း မှုအတွက် အကြောင်းပြချက် များနှင့်စပ်လျဉ်း။ HeyTea က စျေးနှုန်း လျှော့ချခြင်း သည်၎င်း၏ အမှတ်တံဆိပ် အလား အ လာ၊ စကေး တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် တစ်ခုလုံး မှ အကျိုးဖြစ်ထွန်း ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရွိ ၿမိဳ႕ ေပါင္း ၇၀ ခန္႔တြင္ ဆိုင္ ေပါင္း ၉၀၀ နီးပါး ဖြင့္လွစ္ ထားသည္။
ထို့အပြင် HeyTea ၏ ပြောရေးဆို ခွင့်ရှိ သူက ဒေသခံ မီဒီယာ TMTPost ကို တုန့်ပြန် ခဲ့သည်-“ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များကို လူအများ ဝေမျှ နိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် စျေး နှုန်းကို ၁ ယွမ် မှ ၁၀ ယွမ် အထိ လျှော့ ချပြီး ၂၉ ယွမ် ကန့်သတ်ချက် ကိုသတ်မှတ်သည်။ စျေးနှုန်း ညှိနှိုင်းမှု အပြီးတွင် ၁၅ ယွမ် မှ ၂၅ ယွမ် ကြားရှိ အချိုရည် များသည် ရောင်း ရန် ကုန်ပစ္စည်း အားလုံး၏ ၆၀% ကျော်ရှိသည်။”
HeyTea သည် အဖြူ ကော်လာ လုပ်သား များနှင့် လူငယ် များကို အာရုံစိုက်သည်။ ယခုအချိန်အထိ ကုမ္ပဏီသည် ရန်ပုံငွေ ငါး ကြိမ် ရရှိခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများတွင် Meituan Dragon Ball, Tencent Investment, Sequoia Capital စသည်တို့ပါဝင်သည်။
Frost Sullivan မှ ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များအရ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် အဖျော်ယမကာ လုပ်ငန်း သစ် တွင် HeyTea သည် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ဖြင့် ပထမ နေရာတွင် ရပ်တည် ခဲ့ပြီး အမှတ်တံဆိပ် အသိပညာ သည်အမျိုးသား စျေးကွက် ၏ ၄၁. ၅% ကျော်ရှိသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အဖျော်ယမကာ လုပ်ငန်း သစ် သည် အတော်အတန် အာရုံစိုက် မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများ ကိုဆွဲဆောင် နိုင်ခဲ့သည်။ Nayuki သည် အများပြည်သူ သိရှိ ရန် ပထမ ဆုံးသော ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ဤ အခြေအနေတွင် HeyTea သည် ဆန့်ကျင်ဘက် ပြု ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ ထုတ်ကုန် များစွာ ၏ စျေး နှုန်းကို လျှော့ချခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက Cha Yan Yuese သည်၎င်း၏ ထုတ်ကုန် အများစု ၏ စျေး နှုန်းကို ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်အထိ ၁ ယွမ် အထိ တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် Starbucks ၏တရားဝင် အက် ပလီကေးရှင်း များဖြစ်သော Americano နှင့် latte အပါအ ၀ င် ထုတ်ကုန် များစွာ ၏ စျေးနှုန်း များကို ၁ ယွမ် မှ ၂ ယွမ် အထိ တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Starbucks China သည် ထုတ်ကုန် အချို့ အတွက် စျေးနှုန်း တက် သည်
Tags beverage | heytea | nayuki's tea | price reduction | Starbucks
HeyTea ရဲ့ Finance တန်ဖိုးဟာ ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ တန်ကြေးရှိပြီး ဈေးကွက်အတွင်း ဒေါ်လာ သန်း ၉၀ အထိ မြင့်တက်လာ
တရုတ်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ခွဲဖြစ်တဲ့ HeyTea က အင်္ဂါနေ့ကကြေညာလိုက်တဲ့ ရန်ပုံငွေဟာ ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ ရရှိခဲ့တယ်လို့ IDG က ကြေညာခဲ့ပြီး မြို့တော်၊ ဟိုဘား၊ နဂါးပုတီးမြို့တော်၊ ရှမ်း၊ တရုတ်၊ BA Capital ၊ Tencent ၊ High Heat Group ၊ Coatue နဲ့ အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ ဦးဆောင်မဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။
Oriental Honghu သည် bytedance ရန်ပုံငွေ ရရှိ ခဲ့သည်
Oriental Honghu သည် မကြာသေးမီက Bytedance ဦး ဆောင်သော အိန် ဂျယ် အလှည့်ကျ ငွေကြေး ယွမ်သန်း ၁၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅. ၆၉ သန်း) ကျော် ပြီးစီးခဲ့သည်။
Nayuki သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၆ ၇၂ သန်းမှ ၆ ၇၈ သန်း အကြား အသားတင် အရှုံး ကိုချိန်ညှိ ခဲ့သည်
တရုတ် ပုလဲ နို့ လက်ဖက်ရည် ဆိုင် Nayuki က ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ယွမ် ၄. ၂၈ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၆ ၇၂ သန်း) ကနေ ယွမ် ၄. ၃၂ ဘီလီယံ အထိ ရရှိ မယ်လို့ ခန့်မှန်း ထားပြီး အသားတင် အရှုံး ကို ယွမ် ၁၃၅ သန်းမှ ၁၆၅ သန်းအထိ (IFRS တိုင်းတာ ချက် မဟုတ်) ချိန်ညှိ ထားတယ်လို့ အင်္ဂါနေ့က ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။
တရုတ် အဖျော်ယမကာ ကွင်းဆက် HeyTea သည် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အလုပ် မှ ထုတ်ပယ် ခြင်း ကောလာဟလ များကို ငြင်းဆို ခဲ့သည်
တရုတ် အဖျော်ယမကာ ကွင်းဆက် HeyTea က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ၀ န်ထမ်း အနည်းငယ် ကိုပုံမှန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အဖြစ် ညှိနှိုင်း နေ သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Industry Feb 09 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 9, 2022